I-Ultrasonic Quercetin Extraction - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Quercetin iyinhlanganisela yesitshalo seqembu le-polyphenols, eliyaziwa ngezimpahla eziningi zempilo.
Ukuze ukhiqize i-quercetin eliphezulu yezingxube zokudla nezithako zokudla, uhlelo olusebenza kahle, kodwa oluncane lokucutshungulwa luyadingeka ukuvimbela ukubola.
Isizinda se-ultrasonic yindlela encane, engumshini wokukhipha, enikeza izithelo eziphakeme ze-quercetin esikhathini esincane kakhulu sokukhipha.
Ultrasonics High-Performance ye-High-Quality Quercetin Extracts
Isizinda se-Ultrasonic siyaziwa futhi sakhiwa njengendlela elula, engezona ezishisayo, kodwa ephumelelayo kakhulu yokukhulula izidakamizwa eziphilayo ezivela emthini wesitshalo. Isizinda se-ultrasonic sisekelwe esimweni se-cavitation ye-acoustic, okuyinto yokwelashwa okuyiyo kuphela. Lokhu kwenza i-sonication indlela ekhethwayo yokuhlukaniswa kwamakhemikhali e-sensitive bioactive njenge-polyphenols, i-quercetin, noma ama-antioxidants avela ku-botanicals.
Isisindo se-high speed – ngaphakathi kwamaminithi
Izitshalo eziphezulu zekhwalithi – Emnene-non-ezishisayo
Izixazululo ezihlaza (amanzi, ethanol, methanol, njll)
Ukusebenza okulula futhi okuphephile
Ukutshalwa kwezimali okuphansi kanye nezindleko zokusebenza
Ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi kwesisindo esinzima
Indlela eluhlaza, eco-friendly
Sharifi et al. (2017) baye babonisa ukuthi isizinda se-ultrasonic yindlela ephumelelayo futhi ewusizo ukuze kukhishwe ama-flavonoids afana ne-quercetin ezitshalweni zemithi. Basebenzisa i-Hielscher UP400St (400W, bheka pic. Ngakwesokunxele) ku-50% ukulinganisa kwamamitha. Amahlamvu esithombo (ama-Raphanus Sativus) afakwa ku-methanol futhi ahanjiswa ngamaminithi angu-10, okwakubangelwa isivuno se-quercetin esingama-11.8% isivuno. Ukuphakama kwe-ultrasonically kusiza isizinda uma kuqhathaniswa namasu avamile njengama-maceration, isisindo se-Soxhlet nokugaya okushisayo. I-ultrasonic isizinda se-excels esinezivuno eziphakeme, izikhathi ezincane kakhulu zokufakelwa nezibalo ezincane ze-solvents. Ukusetshenziswa kwamagagasi e-ultrasonic kudala i-cavitation, ephazamisa izindonga zeseli yezinto ezitshaliwe futhi ikhuthaza ukudluliselwa kwamandla. Ngakho-ke, isizinda se-ultrasonic siphumelele kakhulu kunezindlela zendabuko futhi siphumelela ekufakweni kwe-quercetin kusuka kumatrices aphilayo. Nakuba isizinda se-ultrasonic sidinga amaminithi angu-10 kuphela. – uma kuqhathaniswa nezikhathi zokukhipha amahora angu-24 we-maceration, 60min. ukugaya okushisayo, namahora angu-24 we-Soxhlet isizinda – inani le-quercetin elikhishwe nge-ultrasonically laliphakeme kunelokugaya, i-maceration ne-Soxhlet isizinda.
Isizinda se-Ultrasonic (UAE) sinikeza i-quercetin ephakeme kakhulu eveza izikhathi ezincane zokuqhathaniswa uma kuqhathaniswa nezindlela ezivamile zokufakelwa.
Umthombo: Sharifi ku-al. 2017
I-120L Ultrasonic Batch Extraction ye-Botanicals nge I-UIP2000hdT ne-Agitator
Izinsimbi zokusebenza zokususa i-Ultrasonic
I-Hielscher Ultrasonics ikhethekile ekukhiqizeni amaphrosesa aphezulu asebenzayo e-ultrasonic ekukhiqizeni izithelo eziphezulu ezivela ku-botanicals.
Iphothifoliyo yomkhiqizo omkhulu kaHielscher isukela kuma-lab ultrasonicators amancane, anamandla amakhulu kumabhentshi amakhulu kanye nezinhlelo ezigcwele zezimboni, eziletha ukuphakama okukhulu kwe-ultrasound ukuze kusetshenziswe kahle futhi kuhlukaniswe izinto eziphilayo (isb. Polyphenols, i-gingerol, Ipiperine, i-curcumin njll). Wonke amadivayisi we-ultrasonic avela 200W kuya 16,000W kufaka isibonisi ezinemibala yokulawula idijithali, ikhadi elihlanganisiwe le-SD lokuqopha okuzenzakalelayo kwedatha, ukulawula okukude kwesiphequluli kanye nezinye izici eziningi zomsebenzisi. I-sonotrodes namaseli okugeleza (izingxenye, ezithintana nephakathi) zingenziwa nge-autoclaved futhi kulula ukuzihlanza. Wonke ama-ultrasonicators ethu akhiwe ngomsebenzi we-24/7, adinga ukugcinwa okuphansi futhi kulula futhi ephephile ukusebenza.
Umbukiso wombala wedijithali uvumela ukulawulwa komsebenzisi-friendly we-ultrasonicator, okwenza inqubo ilungiseke kahle. Amasistimu ethu akwazi ukuletha kusuka phansi kuya kuma-amplitudes aphakeme kakhulu. Ukukhishwa kwe-polyphenols njenge-quercetin, sinikeza i-sonotrodes ekhethekile ye-ultrasonic (eyaziwa ngokuthi i-ultrasonic probes noma izimpondo) ezilungiselelwe ukuhlukaniswa okunengqondo kwezinto eziphezulu ezisebenzayo. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
Ukulawulwa okuqondile kwemigomo yezinqubo ze-ultrasonic kuqinisekisa ukukhiqizwa kabusha nokucubungula ukulinganisa.
Amaprosesa aphezulu aphezulu avela ku-ultrasonic I-Lab ukushayela futhi izimboni zezimboni.
Sharifi, Niusha; I-Mahernia, uShabnam; Amanlou, Massoud (2017): Ukuqhathaniswa Nezindlela Ezihlukahlukene Ezingxenyeni Ze-Quercetin kusuka emaqenjini kaRaphanus sativus L. Imithi Yezokwelapha March 2017, 23, 59-65.
I-Quercetin, i-flavonol yesitshalo (okuyiqembu elincane leqembu le-flavonoid lama-polyphenols) litholakala ezithelo eziningi, imifino, amaqabunga. Imithombo yemvelo ye-quercetin i-apula, i-pepper, iwayini elibomvu, ama cherry omnyama namajikijolo (ama-blueberries, ama-bilberries, ama-blackberries nabanye), utamatisi, imifino e-cruciferous, njenge-broccoli, iklabishi namahlumela; Imifino eluhlaza okwesibhakabhaka, i-auch njenge-isipinashi, i-kale; izithelo ze-citrus, i-cocoa, ama-cranberries, okusanhlamvu okugcwele, okufana nokwabiwa kwamanzi, isoso se-asparagusi, ama-capers, anyanisi obomvu, amafutha omnqumo, itiye elimnyama neluhlaza, ubhontshisi kanye nemifino; amakhambi, njenge-sage, umdala waseMelika, i-wort yaseSt. John kanye ne-ginkgo biloba.
I-Quercetin ihlukaniswe ukunambitheka okubabayo. Ngenxa yemiphumela eminingi yokugqugquzela impilo, isetshenziselwa ukwengeza izithako zokudla, iziphuzo, ukudla kanye nezidakamizwa.
Abacwaningi beYunivesithi yaseVerona, e-Italy, bathola ukuthi i-quercetin glycosides, njenge-isoquercetin, namanye ama-flavonoids afana ne-kaempferol ayinama-anti-viral, anti-microbial, anti-inflammatory and anti-allergenic angathinta izinhlobo ezahlukene zeseli kuzo zombili izilwane nabantu ngokuqinisekile. I-Quercetin ingase isize ukuvuvukala okuncane, ukulwa nokudla, ukusekela impilo yenhliziyo, ubuhlungu bokulwa, okungenzeka ngcono ukukhuthazela, ukulwa nomdlavuza, nokuvikela impilo yesikhumba nesibindi. Njengengxenye ye-botanical, i-quercetin isetshenziswe kusukela ezikhathini zasendulo njengekhambi lemvelo. Isibonelo, e-Iran quercetin isetshenziselwa imithi yendabuko, lapho ilawulwa njenge-laxative futhi yamuva nje njenge-anti-tumor, antiproliferative kanye ne-anti-diabetic agent.